Ngụsị akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ »Mahadum Hodges
Nabata Ndị Gụsịrị Akwụkwọ na Hodges !!!
Ekele dịrị gị n'inweta akara ugo mmụta gị ma were nzọụkwụ ọzọ n'ọdịnihu gị. Anyị nwere obi ụtọ na, na mpako maka, onye ọ bụla n'ime gị! Ọ bụ ezie na isi nke a nwere ike na-eru na njedebe, ọ bụ naanị mmalite maka ọtụtụ ohere ohere ọhụụ gị ga-enye maka njem gị n’ihu.
Anyị na-ele anya ịhụ gị afọ a na anyị Emume mmalite nke 31!
Oge Gụsịrị Akwụkwọ na Mahadum Hodges
Bọchị: Sọnde, Juun 20, 2021
Oge: 4:00 pm
Ọnọdụ: Hertz Arena, 11000 Everblades Parkway, Estero, Florida 33928
Mara Tupu Go Gaa Ozi
I mere ya!
Kwa afọ, ememme ngụsị akwụkwọ bụ ihe omume agụmakwụkwọ kachasị dị ịrịba ama Mahadum Hodges nwere maka ụmụ akwụkwọ na ezinụlọ Hodges niile. Ọ bụ njedebe nke afọ nke ịrụsi ọrụ ike, nnọgidesi ike, na ntinye onwe onye maka ụmụ akwụkwọ na ezinụlọ. E kwesiri ime ubochi dika nke a. Nke anyi Emume mmalite nke 31 ga-asọpụrụ emume ọdịnala ndị soro mmemme nke mmuta agụmakwụkwọ gị. Ememme mmalite nke afọ a na-emeghe nye nwa akwụkwọ ọ bụla gụsịrị akwụkwọ June 6th, 2019 rue Mee 2, 2021.
N'okpuru ebe a, anyị enyela akwụkwọ nyocha nke gụsịrị akwụkwọ iji kwadebe gị maka ụbọchị ngụsị akwụkwọ na ịza ajụjụ gbasara emume ngụsị akwụkwọ. Ndepụta nyocha a na-anọchi ịmegharị akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ. Biko gụgharịa akụkụ nke ọ bụla maka ozi ndị ọzọ ị ga-akwadebe maka June 20th Bọchị ngụsị akwụkwọ.
1. Mezue ogo mmụta niile
Ọ bụ ọrụ nwata akwụkwọ ọ bụla iji mezue Ebumnuche iji gụchaa akwụkwọ na mbido nke ikpeazụ ya. Biko gbaa mbọ hụ na ị nyochara akwụkwọ maka Onye Mmụta Ahụmịhe Mmụta Mmụta gị iji nyochaa na ị zutere ihe mmụta mmụta mahadum niile dị ka edepụtara na katalọgụ mahadum. Ọ bụrụ na i meghị ihe niile achọrọ, a gaghị enye ogo gị ruo mgbe emezuru ihe niile achọrọ. Biko cheta na ọ bụ ọrụ gị iji hụ na emezuru ihe niile achọrọ.
2. Hazie Kape, Uwe na Tassel gị
Requiredmụ akwụkwọ chọrọ isonye na ememme ngụsị akwụkwọ achọrọ ịzụta akwụkwọ ngụsị akwụkwọ (okpu, uwe na tassel) n'oge na-adịghị anya Ike 21, 2021. A na-agba ụmụ akwụkwọ ume ịtụ usoro ha tupu oge aga aga iji hụ na ha nyefere ha n'oge. Agaghị etinye nzụta a dị ka akụkụ nke ego gụsịrị akwụkwọ. Enwere ike ịtụ ihe ndị a n'ịntanetị Herff Jones ma ọ bụ na mmadụ na Ememme Ememme Ngụsị Akwụkwọ.
3. Sọpụrụ ụdọ, Hoods, na mkpọ
Ihe ndị a na-asọpụrụ dị maka iburu na ogige Fort Myers, ma ọ bụ ị nwekwara ike ịjụ enyi gị ma ọ bụ onye ezinụlọ gị ka ọ bulitere ụdọ gị. I nwekwara ike bulie ha na mmalite ụbọchị.
4. Order Gụchara Akwụkwọ Photography
Mahadum Hodges ewegoro GradImages dị ka onye na-ese foto mbido maka ụlọ akwụkwọ na / ma ọ bụ mmemme nnabata. A na-ese foto atọ nke onye ọ bụla gụsịrị akwụkwọ n'oge ihe omume ahụ:
Ka ị na-aga n'ụzọ ogbo ahụ.
Dịka ị na-ekwopu aka Onye isi ala n'etiti etiti.
Mgbe ị hapụsịrị ebe ahụ.
Ihe akaebe gị ga-adị njikere ilele ntanetị ozugbo elekere 48 mgbe ememme ahụ gasịrị. Agbanyeghị na ọ nweghị ọrụ ọ bụla ịtụ, ị ga-echekwa 20% kwụsịrị iwu nke $ 50 ma ọ bụ karịa maka nsonye gị. -Debanye aha bụ naanị ụzọ iji jide n'aka na ozi kọntaktị gị na-arụ ọrụ na GradImages, n'ihi ya, ha nwere ike inye gị ihe ngosi nkwado gị ngwa ngwa o kwere mee. Iji debanye aha maka ihe ngosi mmalite gị, biko gaa na Ihe onyonyo
Dị ka akụkụ nke ngụsị akwụkwọ gị na ntinye aha gị, GradImages ga-ezitere gị ozi ịntanetị, akwụkwọ ozi foto akwụkwọ ozi, ma nwee ike izipu ozi ederede ederede.
5. Mezue ogo mmụta niile
Ndị gụsịrị akwụkwọ nwere ike ịgafe ma mezue ogo mmụta niile Nwere ike 2, 2021, iji depụta ya na Mmemme Amalite.
Biko gbaa mbọ melite ozi gị niile na Office nke Registrar. Ihe omuma ndi edere na diplọma gi ga-ekpebisi ike site na ozi anyi nwere na faịlụ gi. A ga-ezigara ụmụ akwụkwọ diplọma na adres dị na faịlụ ahụ.
Anyị na-agba ụmụ akwụkwọ niile ume ka ha nyochaa ọfịs akaụntụ nke ụmụ akwụkwọ tupu ha amalite. Biko mara na ịghara imezu ọrụ ego niile na mahadum nwere ike igbochi gị ịnata diplọma na / ma ọ bụ transcript na oge kwesịrị ekwesị.
Ozi nke Mmụta Mmụta
Mbata & Mgbakọ
Biko mee atụmatụ ịbịarute elekere 1:30 nke mgbede maka ntụzịaka nke usoro emume ahụ.
Mgbe ha rutere, ndị gụsịrị akwụkwọ nwere ike ịbanye n'ọnụ ụzọ ọwụwa anyanwụ nke ogige Hertz.
Onye ọ bụla gụsịrị akwụkwọ ga-eburu kaadị aha ya na tebụl dị n'azụ ebe a. A na-ebipụta kaadị iji aha iwu gị wee dakọtara na nke a na-ebipụta na mmemme mmemme.
Ozugbo ị natara kaadị gị, biko mezue ngalaba kọntaktị na azụ kaadị maka onye na-ese foto.
I kwesiri iburu kaadị a rue mgbe enyere ya onye nkwuputa tupu o gabiga.
Kaadị a ga-edebe oche gị na akụkụ aka nri ala.
A ga-ekenye oche ndị gụsịrị akwụkwọ nọmba oche na Nkebi nke 115, 116, ma ọ bụ 117 na mkpụrụedemede, yana site na mmemme.
Biko rịba ama na iji rute n’oche gị, ị ga-agagharị n’elu ụlọ. Ọ bụrụ na nke a bụ nsogbu biko mee ka ndị ọrụ mahadum mara tupu ụbọchị mbido.
Gbalia ihu na inwere kaadi aha gi tupu imalite usoro a.
A ga-ewetara ndị ọzọ okpu na uwe mwụda n'ememe a ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka edochi nke gị biko biko hụ onye ọrụ ụlọ akwụkwọ mahadum ma ọ bụrụ na inwee nsogbu. Biko rịba ama na a ga-enwe oke oke mkpuchi na uwe elu na emume ahụ; ọ bụrụ na enwere nsogbu na okpu gị na / ma ọ bụ uwe mwụda 4 ụbọchị ma ọ bụ karịa tupu emume ahụ, biko bịarute ogige Fort Myers ka gị na Office of Auxiliary Services kwuo maka okpu na / ma ọ bụ uwe mgbokwasị.
Uwe ejiji & Omume
Biko bia njikere inwu!
A na-atụ anya na ị ga-eyi uwe agụmakwụkwọ zuru oke (okpu, uwe mgbokwasị na nsọpụrụ ma ọ bụ mkpuchi nna ukwu, ọ bụrụ na ọdabara) maka oge emume ngụsị akwụkwọ.
Ndị gụsịrị akwụkwọ ga-etinye okpu ha na uwe mwụda ha mgbe ha rutere na Hertz Arena. Ndị ọrụ ga-adị njikere inye aka.
Biko hapụrụ ezinụlọ gị, ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ọbịa gị ihe niile dị oke ọnụ na ihe nke aka gị.
A na-eji uwe mwụda eji ejiji:
--Mụ nwoke - uwe elu nke nwere olu akwa, slack slacks, uwe ojii gbara ọchịchịrị, na akpụkpọ ụkwụ ojii.
Womenmụ nwanyị - uwe ojii, ma ọ bụ uwe mwụda ma ọ bụ ogologo ọkpa na uwe elu nwanyị, nwere ojii, akpụkpọ ụkwụ mechiri emechi. Akwadoghị akpụkpọ ụkwụ dị elu. Akpachapụ anya, akpụkpọ ụkwụ tenis, na akpụkpọ ụkwụ ọcha ekwesịghị iyi.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, biko pịa igwe gown gị na igwe dị jụụ.
Okpu agha kwesiri i dina ala na ntughari n'elu aka nri. Ndị gụsịrị akwụkwọ kwesịrị ịkpachara anya ka ha ghara ịhapụ tassel ka a na-ese foto.
Ọ bụrụ na ọdabara, a ga-eyiri eriri nsọpụrụ n'olu ya na tassels na-agbada n'akụkụ ọ bụla. A ga-ekesa ụdọ nsọpụrụ dịka iwu nke mahadum si dị:
Silver & Red maka summa yana laude (3.90-4.0 GGPA);
Ugboro abụọ Red maka magna yana laude (3.76-3.89 GGPA); ma ọ bụ
Ugboro abụọ Silver maka yana laude (3.50-3.75 GGPA).
The mahadum na-eme mgbalị ọ bụla iji dozie ma duzie ememe dị mma, nke dị ùgwù. A kwesiri iji nkwanye ugwu nke ihe omumu gi. Omume aghara aghara, esemokwu, ma obu mmanya na mmanya ma obu ogwugwo na nkpuru obi aghapu iwepu ya ozugbo.
A dụrụ ndị gụsịrị akwụkwọ ọdụ ka ha jiri ụlọ mposi tupu mmalite nke emume ahụ, n'ihi na a gaghị ekwe ka ị hapụ oche gị ozugbo ememme ahụ amalite.
Achọrọ ndị gụsịrị akwụkwọ ka ha nọrọ ọdụ na mmemme niile.
Ndị gụsịrị akwụkwọ na-anọdụ na ngalaba nke 115, 116, ma ọ bụ 117 ka ha wee gafere usoro ahụ. Usoro a dabara na otu esi edepụta asambodo ahụ na mmemme mmalite, mkpụrụ akwụkwọ, na ogo.
A ga-agwa gị ka ị gbadaa n'ala ala na 3: 30pm will ga-etolite ọtụtụ ahịrị dị ka o kwere mee n'azụ usoro. Mgbe usoro ahụ malitere, ụmụ akwụkwọ ga-aga n'ihu na-aga n'akụkụ ala ahụ ngwa ngwa o kwere mee. Mụ akwụkwọ na-abịaghị n'oge ga-etinye ha n'azụ ndị gụsịrị akwụkwọ na ndị ọzọ niile nwere ike ghara ịnọdụ ala n'akụkụ ndị ọzọ na-enweta otu ogo na isi. Biko hụ na ị bịara n’oge.
Onye isi oche Marshal nke Board
Ndi umu akwukwo
Ndị na-aga Bachelor
Ndị na-aga akwụkwọ
A ga-enye mmemme mmemme ka ị na-abanye n'ala mbụ.
Banye isi ala tinyere akụkụ ugwu nke ebe egwuregwu ahụ. Gaa n'ihu wee banye n'oche oche, tụgharịa aka nri, ma tụgharịa aka nri na etiti wara wara.
Mmalite Ememme Nkọwa
Mgbe nwa akwụkwọ ahụ na ọkà okwu ọbịa kwusịrị, onye isi ala ga-ajụ ndị niile chọrọ ka ha nweta akara ugo mmụta were were.
Mgbe ahụ, onye isi ala ga-enye ogo mmụta Master.
Ozugbo akụkụ a mechara, a ga-eziga gị na mpaghara ebe ị ga-agafe n'ogo ahụ n'otu n'otu iji hụ onye ahọpụtara tupu oge ahụ.
Biko nyefee ha kaadị aha gi ka elu ka o nwee ike igu aha gi.
Ozugbo i nyefere kaadị aha gị, gafee usoro ahụ dị ka eserese gosiri.
Ziri ezi ụzọ na-anabata ubre mkpuchi si Dr. Meyer bụ na aka ekpe gị. Keezie aka nri gị.
Nke a ga-abụ ebe a ga - ese foto otu ya biko cheta ịmụmụ ọnụ ọchị.
The Grand Marshal ga-atụgharị gị tassel na-atụgharị aka gị.
Netwọk Alumni ga-enye gị onyinye, ngalaba ga-ekele gị tupu ị laghachite n’oche gị.
Biko nọdụ ala mgbe ị laghachiri n’oche gị.
Ndị gụsịrị akwụkwọ na bachelor, ndị otu, na asambodo ga-agbaso otu usoro ahụ.
Ọ bụrụ na ịnọdụ ala na Nkebi B, biko soro ntuziaka enyere iji nweta ọkwa ahụ wee laghachi n'oche gị.
Iwu nke nlaazu:
Ndị gụsịrị akwụkwọ
Ndị ọrụ Mahadum Hodges ga-eme ka ị mara mgbe ahịrị gị nwere ike ịpụ.
Biko akwụsịkwala mgbe ị rutere mpaghara ahụ n'azụ ebe ndị ọzọ gụsịrị akwụkwọ na-anwa ịhapụ.
Gbalịa ịkwado ebe gị na ndị ezinụlọ gị na ndị enyi ga-anọ nwee nzukọ ka ị nwere ike ịpụ n’ọgbọ egwuregwu ahụ n’akụkụ abụọ n’azụ ebe ahụ.
Enwere ike ilele mmemme mmalite ndụ na ihu igwe anyị na 4: 00pm na June 20th, 2021.
Uzo esi aga na Hertz Arena
Site na North: Were I-75 gaa Wepụ 128 (Alico Road). Gaa n'isi ọwụwa na Alico Road ruo Ben Hill Griffin Parkway. Were Ben Hill Griffin maka ihe dịka 3.5 kilomita na ndịda. Arena dị n'akụkụ aka nri.
Site na South: Were I-75 gaa Wepụ 123 (Corkscrew Road). Uzo esi aga na họtelu Head gabas Corkscrew Road. Were Ben Hill Griffin n'ebe ugwu na Arena dị n'akụkụ aka ekpe.
Ebe a na-adọba ụgbọala na-emepe awa atọ tupu emume mmemme.
Enwere ebe a na-adọba ụgbọala dị na Hertz Arena na ọtụtụ ọdụ ụgbọ ala gbara ya gburugburu.
A naghị akwụ ụgwọ maka ebe a na-adọba ụgbọala.
Iwu Hertz maka iweta ihe nkeonwe ***** Biko Gụọ
Hertz Arena nwere iwu siri ike maka ihe ọ bụ na anaghị ekwe ka ebubata ya. Pịa EBE A maka iwu ndị ahụ, nke a ga-etinye n'ọrụ.
Ogige Ndị ọbịa
Ọbịa kwesịrị ibata n'etiti 3:00 na 3:30 pm
Ebe egwuregwu ahụ na-enye ebe obibi mepere emepe, enweghị tiketi achọrọ.
Enwere oche na-adịghị ike n'akụkụ ebe ndịda. Enwere oghere maka oche nkwagharị na ụfọdụ oche ndị na-akwụghị ụgwọ. Otu ọbịa nwere ike ịnọnyere onye ọbịa nwere nkwarụ.
Biko rịba ama na anaghị anabata ụmụaka agba bọọlụ, balọn, na ifuru n’ọgbọ egwuregwu. A ga-enyocha ndị na-agba ọsọ, balloons, na okooko osisi na ndị ọrụ Hertz ma debe ya na tebụl isi wee nwee ike iburu ya mgbe emume ahụ gasịrị.
Otu ebe nkwenye ga-emeghe maka nri na ihe ọ drinksụ drinksụ n'akụkụ ndịda nke ebe egwuregwu ahụ.
A gbara ndị nne na nna, ndị ezinụlọ, na ndị enyi ume ka ha nọrọ ọdụ, ebe ịhapụ ememe ahụ na-egosi enweghị nkwanye ùgwù zuru oke nye ndị niile bịara ya.
Biko cheta na onweghi onye ekwe ka ya n’elu ulo ma obu n’akuku wara foto.
E goro onye ọkachamara ọkachamara ka ọ were foto na-enweghị ọrụ nke onye ọ bụla gụsịrị akwụkwọ.
Ndị ezinụlọ na ndị enyi nwere ike ịse foto n’otu oche.
Na-agụsị akwụkwọ Student FAQ's
Ebee ka m ga-aga buru ụdọ nsọpụrụ m?
A na-enweta ụdọ nsọpụrụ maka iburu na ogige Fort Myers, ma ọ bụ ị nwekwara ike ịjụ enyi gị ma ọ bụ onye òtù ezinụlọ gị ka ọ bulitere ụdọ gị. I nwekwara ike bulie ha na mmalite ụbọchị.
Kedu mgbe m nwere ike iburu diplọma m?
Dịka onye gụsịrị akwụkwọ na Hodges, ị ga-enweta diplọma dijitalụ na diplọma nke ahụ. A ga-eziga ntuziaka na ịnweta diplọma dijitalụ na email Hodges gị. A ga-eziga diploma nke anụ ahụ gị na adreesị dị na faịlụ ahụ.
Nye ka m ga-akpọtụrụ ma ọ bụrụ na m na-enweta njehie ozi mgbe m pịa njikọ na ibe ngụsị akwụkwọ?
Ozugbo i tinyechara akwụkwọ maka ngụsị akwụkwọ site na imecha mpempe akwụkwọ ebumnuche nke gụsịrị akwụkwọ, sistemụ anyị agaghị ekwe ka ịme nke a ọzọ. Nke a bụ ihe kpatara ị ga - eji nweta njehie. Ọ bụrụ na i mezughi Ebumnuche nke Akwụkwọ, biko kpọtụrụ Office nke Registrar na 239-938-7818 ma ọ bụ registrar@hodges.edu.
Kedu ka m ga-esi nye tiketi maka ngụsị akwụkwọ? Ọ bụrụ na m chọrọ ọzọ tiketi maka ngụsị akwụkwọ, gịnị ka m kwesịrị ime?
Mgbe ịmechara akwụkwọ ebumnuche gị maka akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ, enwere ebe iji tinye ọnụọgụ nke ndị ezinụlọ / ndị enyi ga-aga. Anyị anaghị ebipụta tiketi maka ngụsị akwụkwọ, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ezinụlọ / ndị enyi ọzọ ga-achọ ịga, ha na-anabata gị karịa!
Enwere m ike icho mma okpu ngụsị akwụkwọ m?
Anyị na-akwado gị ka ị chọọ okpu gị mma! Biko buru n'uche na a ga-achọ ya mma iji gosipụta obi ụtọ niile ị rụzuru, agbanyeghị, ekwesịrị ịme ya na ezigbo uto na nkwanye ùgwù. Biko cheta na a ga-etinye ụdọ gị na okpu gị - biko etinyela ihe ọ bụla na okpu gị nke nwere ike igbochi itinye tassel na okpu gị.
Enwere m ike iburu uwe m n’ememme ngụsị akwụkwọ?
Anyị na-akwado gị ka ị ghara ichere ruo ememme ngụsị akwụkwọ iji bulie / zụta ngwa gị. Anyị ga-enwe oke oke oke nke emume a na - eme n’ememe a nwere sọsọ karịa. Nke kacha adaba nhọrọ bụ ịtụ gị regalia ọ bụla na http://colleges.herffjones.com/college/_Hodges/ ma ụbọchị ikpeazu ịtụ bụ Nwere ike 21, 2021. A na-agba ụmụ akwụkwọ ume ịtụ usoro ha nke ọma tupu oge a agafee iji hụ na nnyefe ha bịara n'oge ha.
Kedu onye m ga - enweta maka ajụjụ ngụsị akwụkwọ?
Maka Regalia (okpu / gown), hoods nna ukwu, tassels, okpokolo agba, akara ekele, akara ndị okenye, akwụkwọ ngụsị akwụkwọ, wdg, kpọtụrụ Office of Auxiliary Services na (239) 938-7770 ma ọ bụ universitystore@hodges.edu.
Maka diplọma, ụdọ nsọpụrụ, transcript (mgbe enyere akara ogo), kpọtụrụ Office nke Registrar na (239) 938-7818 ma ọ bụ registrar@hodges.edu
Nọrọ na Jikọọ! #HodgesAlumni
The Hodges University Alumni Network bụ ụzọ gị iji jikọọ na ịkparịta ụka n'andntanet ma zute Hodges Alum ibe gị. Enweghị ụgwọ iji sonye na ọtụtụ uru ịbụ onye otu. Biko debe Network Alumni nke emelitere nke adreesị ọ bụla na mgbanwe ọrụ, yana / ma ọ bụ rụzuru ndị ọkachamara ka anyị wee soro ndị ọzọ kerịta ihe ịga nke ọma gị. Kpọtụrụ anyị na alumni@hodges.edu. Adreesị ozi-e ugbu a dị mkpa maka kọntaktị ndị okenye na nnata nke ozi ndị okenye.